Pass, password password maneja Cli Linux Vakapindwa muropa
Pass, password password maneja Cli
Kana iwe uri mumwe wevanoda mamaneja epassword kana iwe unoona iko kushanda kunoshanda mavari, rega ini ndikuudze kuti inotevera password maneja anogona kunge ari aunofarira.
Iyo password password iyo yandiri kuzokuudza nezvako nhasi ine zita «Pfuura» uye izvi ndizvo maneja wepassword akafuridzirwa neiyo Unix uzivi iyo ine yekuraira mutsara interface uye inoshandisa GnuPG kunyorera uye kudonhedza kwepassword dzakachengetwa.
Uye zvakare, zvinotaurwa pawebhusaiti yepamutemo yekushandisa kuti izvi mafaira akavharirwa anogona kurongwa kuita zvine mutsindo dhairekitori, kuteedzera kubva kune imwe komputa kuenda kune imwe uye zvinowanzo shandiswa uchishandisa yakajairwa command mutsara faira manejimendi zvinoshandiswa.
Pass inoita kugadzirisa aya ega ega password mafaira zvakanyanya nyore. Ese mapassword akachengetwa mu ~ / .password-chitoro uye iyo app inopa mimwe yakanaka mirairo yekuwedzera, kugadzirisa, kugadzira uye kutora mapassword.
Iyo ipfupi kwazvo uye yakapusa shell script. Iyo inokwanisa kuisa kwechinguva mapassword pane yako clipboard uye yekutevera password shanduko uchishandisa git.
Iwe unogona kugadzirisa iro password chitoro uchishandisa zvakajairika Unix shell mirairo pamwe chete nepasscommand. Iko hakuna mafomati epakutanga mafaira kana maparagiramu matsva ekudzidza. Iko kune bash kupedzisa kuti iwe ugone kungorova iyo tabo kuti upedze mazita nemirairo pamwe nekuzadza zsh nehove zviripo mune yekupedzisa dhairekitori. Nharaunda inoshanda kwazvo yakaburitsa vatengi vazhinji uye GUI
Faira repassword rinogona kunge riine mamwe mavara senge zita rekushandisa, kero yeemail, makomenti, kana chero izvo zvinoda mushandisi, sezvo mafaera epassword asiri chimwe chinhu kunze kwekunyora mafaira emafaira.
Yehukuru hunhu de Pass zvinotevera zvionekwe:
Akaunti inotsigira vatengi vakasiyana vanosanganisira kuyambuka-chikuva graphical nzvimbo yemamwe mapuratifomu, vatengi veWindows, Android, iOS, kuwedzerwa kweFirefox, inowirirana mushandisi mushandisi, nezvimwe.
Iyo ine autocomplete tsigiro muBhash
Iyo ine Git yekubatanidza rutsigiro
Inokutendera iwe kuendesa mapassword kubva kune vamwe password mamaneja, anosanganisira LastPass, KeepassX, Keepass2 CSV uye XML, CVS, 1Password uye KWallet
Tsigiro yekugadzira password
Iyo ine akati wandei graphical mushandisi maficha (GUI) anowanikwa, senge QtPass yeLinux, Windows, MacOS kana password Chitoro cheanoshanda masystem eAroid.
Kana zviri zvekuita izvo zvinoonekwa sezvakakosha mumaneja epasiwedhi, ndiyo nzira yekuwiriranisa iyo Pass isina, asi kune izvi ine rutsigiro rweGit kuti ive nekwaniso yekuenderanisa uchishandisa vhezheni yekudzora system. Iyo yakavakirwa-mukati yeGit mashandiro zvakare inobvumidza otomatiki kuteedzera kwepassword vault vhezheni yenhoroondo.
Maitiro ekuisa Pass password maneja pane Linux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ichi chinoshandiswa pane avo masisitimu, ivo vanofanirwa kuziva kuti Pass iri mukati mezvakachengetedzwa zvekuparadzirwa kukuru kweLinux.
Semuenzaniso, kune avo vanoshandisa Debian, Ubuntu kana kugoverwa kunobva pane izvi, Ivo vanogona kuisa iko kunyorera kubva kune iyo terminal nekumhanyisa unotevera kuraira:
Panguva yeavo vanoshandisa Fedora, RHEL, CentOS kana kumwe kugovera yakabva pane idzi, vanogona kuita kumisikidza nekunyora murairo unotevera:
Zvino, kana uri vashandisi ve Arch Linux, Manjaro kana kumwe kugovera kunobva kuArch Linux, vanogona kuisa iyo application nekumhanya:
Kunze kweizvozvo kune zvakare QT package yekushandisa, iyo inogona kuiswa ne:
Kana vari avo vari openuse vashandisikumisikidza kunogona kuitwa nekutaipa:
Pakupedzisira, Nezve kushandiswa kwechishandiso, unogona kubvunza ruzivo mune izvi uye nekumisikidza Pass uye mushandisi bhuku zvakananga kubva kune yayo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Pass, password password maneja Cli